Ufunyenwe ethe cwaka uAviwe emva kokuduka! | Ilisolezwe
Ufunyenwe ethe cwaka uAviwe emva kokuduka!
Iindaba / 10 August 2017, 09:21am / Unathi Tuta
Kapa: Uthi akothukanga kakhulu kukufunyanwa komzimba wentombi yakhe kufutshane nebala lemidlalo iVygieskraal kufutshane neAthlone umama ka-Aviwe JamJam, kuba intombi yakhe ibingonwabanga kubudlelwane ebikubo neqabane layo. Umama wale ntwazana ibineminyaka engamashumi amabini anesithandathu ubudala yaseSite C uthi: “Kudala ezama ukohlukana neqabane lakhe kuba belimbetha kwaye nathi silusapho kuziziganeko ziliqela umfana ebencuma naye esiza kusigrogrisa ngokusibulala. Kwelinye ityeli wafika negqiza labahlobo bakhe babetha umyeni wam apha phambi kwendlu bamonzakalisa bephethe imipu, iiphanga nezixhobo ezinobungozi.”
Le nkosikazi ivakalise uloyiko, ingafuni nokufotwa isithi yoyikisela ukuba umrhanelwa angathumela abahlobo bakhe bazokubabulala. Uloyiko lwale nkosikazi belubonakala nakubahlobo bak- Aviwe abangafunanga ukudizwa ngamagama, bengafuni nokuba kuthathwe imifanekiso yabo, besithi bebesele bengasanxulumani naye uAviwe ngenxa yokoyika umrhanelwa.
Omnye umhlobokazi uthi: “Kwisiganeko sokubhaca kuka-Aviwe ebaleka iqabane eli lakhe, lafika endlwini yam liyokumkhangela, ndathi ndakumxelela ngomlomo ukuba akekho wangena ngaphakathi wagqogqa amagumbi emkhangela, wanyanzelisa ukuba ndivule namagumbi asecaleni eqinisekisa ukuba andimfihlanga kuwo kusini na”.
Ilungu losapho elingoyikanga ukudiza igama nokuthatha imifanekiso ngumzala kaAviwe, uSivuyile Ndeleni, uthi: “Silusapho sonakele kakhulu kuba umzali xa efumana umntwana uyavuya ngeenjongo zokuba uyakumkhulisa ngendlela eyiyo ze amsebenzele. Besisajonge lukhulu kuAviwe, ufundisiwe kuba bekujongwe impumelelo kuye, kubuhlungu ngoku amagama aphelela emqaleni. Izinto ezinje siqhele ukuzibona kumajelo eendaba asizange sayicinga ukuba ingasehlela.”
Amapolisa angqinile ukuba emva kokudizwa kukaAviwe njengolahlekileyo kuye kwafunyawa umzimba kufutshane nebala lezemidlalo eAthlone unomonzakalo entloko.
Othethela i-SJC uChumile Sali uthi: “Sizakulixhasa usapho lukaAviwe ezinkundleni siqinisekise ukuba umenzi wobubi ujamelana nengalo yomthetho.”
Ukanti umphathiswa wamapolisa kuzwelonke uFikile Mbalula utyelele usapho lwexhoba eyokudlulisa amazwi ovelwano.